အပိုင်းအမည် Coilover Auto Shock Absorber တွင်
မျက်နှာပြင်ကုသမှု Powder Coating / Chromed
မျက်နှာပြင်အရောင် ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်အရ အနီရောင်/ရွှေ/အပြာ/အနက်ရောင်/အပြာ/အနက်ရောင်။
လျှောက်လွှာများ BMW E46 သို့မဟုတ် အခြားကား
ချိန်ညှိနိုင်သည်။ ချိန်ညှိနိုင်သော Damping၊ ချိန်ညှိနိုင်သော အမြင့်နှင့် ချိန်ညှိနိုင်သော ဆလင်ဒါ
အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု ISO9001/TS16949:2002 ဖြင့်ဆောင်ရွက်သည်။
ထုပ်ပိုးခြင်း။ အတွင်းအရောင်သေတ္တာ၊ အပြင်ဘက်-စံကာတန်သေတ္တာ
ဖောက်သည်၏လိုဂိုပုံနှိပ် ဟုတ်ကဲ့၊ အရောင်အကွက်/ Shock Body ပေါ်ရှိ Logo နှစ်မျိုးလုံးကို ရရှိနိုင်ပါပြီ။
အာမခံ ထုတ်လုပ်မှုချို့ယွင်းချက်များအတွက် 1 နှစ်အာမခံ
ပမာဏ- ရှေ့ ၂ ပိုင်း + နောက် ၂ ပိုင်း
Damper ချိန်ညှိနိုင်သော Damper
ချိန်ညှိနိုင်သော ကင်မရာပြား ဟုတ်ကဲ့
ထူးခြားချက် - အစိတ်အပိုင်းအများစုအား 6063 အလူမီနီယမ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး မာကျောမှုတိုးလာစေရန် T6 ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
- အားသာချက်များမှာ အစွမ်းထက်သန်မာပြီး အလူမီနီယမ်သည် အလေးချိန်ကို ကျစေပါသည်။
- Hi Tensile performance spring - အကြိမ် 600,000 ဆက်တိုက်စမ်းသပ်မှုအောက်တွင်၊ စပရိန်ပုံပျက်မှုသည် 0.04% ထက်နည်းပါသည်။
-ထည့်သွင်းမှုအားလုံးသည် damper ကိုကာကွယ်ရန်နှင့်သန့်ရှင်းစေရန်အတွက်တပ်ဆင်ထားသောရာဘာဖိနပ်များပါရှိသည်။
သင့်ကား၏အသွင်အပြင်ကို အလွယ်တကူ အဆင့်မြှင့်ရန် မြန်ဆန်ပြီး တတ်နိုင်သောနည်းလမ်း။
- လုံးပတ် bearing ပါသော Pillow Ball Mount
- Poly Urethane ချုံပုတ်များ (အသုံးပြုနိုင်သည့်အခါ)
- Power Coated Damper ကိုယ်ထည်
-Oil Seal သည် နာမည်ကြီးတံဆိပ်ဆီတံဆိပ် -NOK ကိုအသုံးပြုထားသောကြောင့် တံဆိပ်ခတ်ခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်ပြီး သက်တမ်းသည် 2000000 နှင့်အထက်ဖြစ်သည်။
-Piston Rod Mirror-surface treatment၊ Hard chrome plated သည် tensile Strength နှင့် compressive strength ကို 800 Mpa အထက်တွင် ပြုလုပ်ထားသည်။
1. coilover သည် shock absorber ၏ အမြင့်နှင့် internal damping force ၏ အရွယ်အစားကို လွတ်လပ်စွာ ချိန်ညှိနိုင်ပြီး၊ ၎င်းသည် ယာဉ်၏ အမြင့်နှင့် အလွန်မြင့်မားသော suspension ၏ မာကျောမှုအရ မော်တော်ယာဥ်အား အလှည့်အပြောင်းဖြစ်စေနိုင်သည်။ ကစားနိုင်မှုနှင့် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်။
2. pneumatic shock absorber နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက coilover သည် ရိုးရှင်းပြီး ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသော ဖွဲ့စည်းပုံ၏ အားသာချက်များရှိသည်။ အခြေခံအားဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင် စွက်ဖက်မှုမှ ကင်းစင်ခြင်း၏ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု အားသာချက်။
1. ယာဉ်မွမ်းမံပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်လာလျှင် အခြေခံအားဖြင့် ဘေးကင်းရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာအချို့ ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။ ပြုပြင်ထားသော coilover နှင့်ပတ်သက်ပြီး ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးကို အာမခံနိုင်ခြင်းမရှိပါက သို့မဟုတ် ပြုပြင်ထားသော တပ်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်သည် လိုအပ်ချက်များနှင့် မကိုက်ညီပါက ကြီးစွာသောဘေးကင်းလုံခြုံရေး အန္တရာယ်ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
2. pneumatic shock absorber နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက coilover ၏ အမြင့်ချိန်ညှိမှုသည် ၎င်း၏အကြီးမားဆုံးချို့ယွင်းချက်အဖြစ် ဖော်ပြနိုင်ပါသည်။ Shock absorber ၏ ကန့်သတ်ချက်ကြောင့်၊ coilover ၏ ချိန်ညှိမှုသည် ကားမှ shock absorber တစ်ခုလုံးကို ဖြုတ်ပစ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးတွင် အထူးကိရိယာများစွာ လိုအပ်ပါသည်။
သက်တောင့်သက်သာရှိစေရန် coilover ကိုမည်ကဲ့သို့ချိန်ညှိမည်နည်း။
သွားလိမ်ခြင်း၏ သက်တောင့်သက်သာရှိမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် အဓိကအားဖြင့် damping force ကို ချိန်ညှိပါသည်။
စိုစွတ်မှုမြင့်လေ၊ သက်တောင့်သက်သာရှိလေ ပိုဆိုးလေ၊ သို့သော် ပြင်းထန်သောမောင်းနှင်မှုလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သော ယာဉ်အတွက် ၎င်း၏ပံ့ပိုးမှုပိုကောင်းလေဖြစ်သည်။ စိုစွတ်မှုနိမ့်လေ၊ သက်တောင့်သက်သာရှိလေ ပိုကောင်းလေ၊ သို့သော် ယာဉ်အတွက် ၎င်း၏ပံ့ပိုးမှုမှာ လိုက်လျောညီထွေ ပြောင်းလဲသွားမည်ဖြစ်သည်။ ကွာခြားမှု။
ယေဘူယျအားဖြင့် coilover အထက်တွင် damping force ကိုချိန်ညှိရန် ခလုတ်တစ်ခုရှိသည်။ နာရီလက်တံနှင့် တန်ပြန်လှည့်ခြင်းဖြင့် ၎င်း၏ပျော့ပျောင်းမှုနှင့် မာကျောမှုကို အလွယ်တကူ ချိန်ညှိနိုင်သည်။ မည်မျှအဆင်ပြေသည်ဆိုစေကာမူ ပိုင်ရှင်များ၏ အတွေ့အကြုံပေါ် မူတည်ပါသည်။
Max Auto မှပြုလုပ်သော coilover သည် damping force တည်ငြိမ်စေရန်အတွက် chrome plating hollow piston rod ကိုအသုံးပြုသည်။
၎င်းသည် မြင့်မားသော tensile စွမ်းဆောင်ရည် စပရိန်ကို အသုံးပြုသည် - အကြိမ် 600,000 စဉ်ဆက်မပြတ် စမ်းသပ်မှုအောက်တွင်၊ စပရိန်ပုံပျက်မှုသည် 0.04% ထက်နည်းသည်။
-Oil Seal သည် ကျော်ကြားသော အမှတ်တံဆိပ်ဆီတံဆိပ် -NOK ကိုအသုံးပြုထားသောကြောင့် တံဆိပ်ခတ်ခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်ပြီး သက်တမ်းသည် 2000000 နှင့်အထက်ဖြစ်သည်။
ရောင်းချပြီး 1 နှစ် အတွင်း အာမခံ 1 နှစ် ပေး ဆောင် ပေး ပါ သည် .ဥပမာ ဆီ ယိုစိမ့် မှု များ ရှိပါက ၊ အစိတ်အပိုင်း များကို အခမဲ့ လဲလှယ် ပေး မည် .
ယခင်- တရုတ် လက်ကား Shock Absorber Bushing ပေးသွင်းသူများ - အရည်အသွေးမြင့် ရော်ဘာ ကားဆိုင်းထိန်း ရော်ဘာချုံများ - Max
နောက်တစ်ခု: ရေပန်းစားသော ရော်ဘာ Shock Absorber ရော်ဘာ Buffer
တရုတ် Coilover စက်ရုံ